Ogaden News Agency (ONA) – Males Zenawi oo wali naftii ku jirto, Balse Diplomasiyiin ree galbeed ahi sheegeen in Zakaratul Mowdki hayo.
Males Zenawi oo wali naftii ku jirto, Balse Diplomasiyiin ree galbeed ahi sheegeen in Zakaratul Mowdki hayo.
Wargeyska The Daily Telegraph ayaa waxa loo xaqiijiyay in Raisal wasaaraha Ethiopia Males Zenawi uu kusugan yahay dhaqtar ku yaala Brussel xanuun uusan ka kaceyn oo laga yaabo innuu u dhintana uu hayo. Wargeyska ayaa waxaa warkaas u xaqiijiya Diplomasiyiin xogta dhabta ah haya.
Diplomasiyiinta Ree Galbeedka ah ee Wargeyska u waramay ayaa sheegay in Males Zenawi uu ku jiro dhaqtarka lagu magacabo Saint Luc University Hospital halkaas oo lagu ogyahay in Zenawi cudur khatar naftiisu la tahay hayo balse aan la sheegin xanuunka waxa uu yahay wali. Balse Hospitalkan ku yaala Brussel ayaa ah Cusbitaal lagu daaweyo xanuunka la xidhiidha dhiiga ee loo yaqaano Haematological ama Dhiiga Kanserka ku dhaca (Blood Cancer).
Diplomasiyiinkale oo u waramay Saxaafada AFP ayaa sheegay iyana in Males Zenawi cudurkan ay u badantahay innuusan ka badbaadin oo u dhinto. Waxa uu ku jiraa xaalad aad u adag noloshiisana waxay ku jirtaa khatar. Balse waxa ninkale oo Diplomasi ah sheegay wali inuusan dhimanin oo naftii ay ku jirto.
Waxaa taliska Ethiopia oo marar badan sheegay inay shaacin doonaan xaalada Caafimaad ee ra isal wasaraha Ethiopia ayaa maanta mar labaad ka gaabsaday balantii ay qaaden ee aheyd inay shir saxafadeed ku sheegayaan in Zenawi nabad qabo oo cafimaadkisu taam yahay. Dowlada Ethiopia ayaa qiratay in Zenawi dhaqtar ku jiro balse illaa hada wax dheerad ah oo looga qaateyn ah maysan ku hadlin. Been iyo turufo ayayna u sheegeen caalamka.
Waxaa wargeysyada caalamku ay sheegeen in shacabka Ethiopia oo gadoodsan ay aad uga sii xanaaqeen beenta taliska Ethiopia ka sheegayo ra isal wasaraha sii dhiman raba.
kaligii taliye Zenawi ayaa jira 57 sano, waxuuna xilka Ethiopia si sharci darro ah ku heystay muddo lagasoo bilaabo 1991 ilaa hada oo dhaqtarka uu sakaratul meydkii ku hayo.
Waxii kasoo kordha kacdomada looga soo horjeedo Taliska TPLF iyo sakartul mowdka Zenawi haya dib ayaan idiinka soo gudbin Doona.